MiddleEastMonitor:Imaaraadka Carabta iyo Isra’iil xidhiidhkooga oo si degdeg ah u koraya - Horn Future
London (Horn Future)-Wargayska ( Middle East Monitor),ayaa waxa uu daaha ka fayday waraaqo ay kasoo gudbiyeen Wikileaks oo tilmaamaya isdhexgalka dhaqaale,diblomaasiyadeed ,nabadgelyo iyo ciidan ee u socda sida degdegga ah ee u dhaxeeya Imaaraadka Carabta iyo Isra’iil.
Waraaqahan ayaa waxay muujinayaan kaalinta weyn ee uu ka ciyaaray safiirka qoyska maamula Imaaraadka u fadhiya Maraykanka Yuussuf Al Cutayba oo isagu ku riixay maamulka qoyskan inuu sameeyo xidhiidh u dhexeeya Israa’iil oo leh jihooyin marxalado kala duwan oo aanan hore loo arag.
Wargayska ayaa waxa uu tilmaamay in Imaaradan kaliya aynan noqon goob ammaanka iyo danaha dhaqaale ee Israel ay leedahay,laakiin ay noqotay hilinkii isku dayayay inay ku soo jiidato dunida Carabta inay ku socdaan iyaga oo fuushan aragtida Israa’iil ee gobolka iyo arrimeheega,oo ay ugu horeeyso arrinta Falastiiniyiinta.
Waraaqahan ayaa waxay sheegayaan in 2010-kii uu qaabilay qoyskan maamula Imaaraadka Carabta koox katirsan ciyaarta loo yaqaano ( judo) ama lagdanka oo Isra’iiliyiin ah.
Waxa imaanshan kooxdan ay kusoo beegantay dilkii shirqoolka ahaa ee loogu gaystay hoggaamiyihii ururka (Xamaas) Maxmuud al-Mabxuux magaalada Dubai oo Imaaradan ay iskaashadeen fulintiisa sirdoonka Isra’iil ee (Mossad),halkaas oo isla xilligaas aanan lala yaabin in laga hortaggo inay kor u qaadaan calanka Falastiiniyiin ku nool Imaaraadka sida ku xusan waraaqahan.
Waxa waraaqahan Wikileaks ay tilmaamayaan heshiis dhexmaray qoyska Imaaraadka Carabta iyo shirkadda AGT ee amniga ee laga leeyahay Isra’iil si loo sugo amaanka goobaha saliidda iyo gaaska, iyo sidoo kale in laga aasaaso shabakad kormeer xagga rayidka ah oo ku taal Abu Dhabi.
Sida laga soo xigtay wargayska ( Monitoring Middle East),waxa ciidamada qoyska Imaaradan iyo kuwa Isra’iil iyo Maraykanka ay sida wadajir ah uga qaybqaateen dhammaadkii sannadkii hore carbis ciidan oo loogu magac daray ( Red Flag) ama calanka cas kaas oo ka dhacay dalka Greek ga.
Dhinaca kale xeel-dheerayaasha la socda arrimaha gobolka ee istraatiijiga ah ayaa waxay xaqiijiyeen in xidhiidhka u dhexeeya qoysaska maamula Gacanka Carbeed iyo Israa’iil sida Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta uu kor kacay kadib kacdoonadii ka bilowday dalalka Carabta oo xornimo doonka ahaa,iyada oo si cad oo muuqata ay usii kordheen sanadkii u dambeeyay.
Waxa xusid mudan in qoyskaska Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay ku bixiyeen hanti ka badan ( $ 40 billion dollar) milyaar oo dollar shirqoolkii lagu afgambiyay madaxwaynihii u horeeyay ee bulshada Masar si dimuqraadiyad ah usoo doorato taariikhda dalkaasi Maxamad Mursi.
Afgamigan oo uu gaystay dilaaga Sisi oo taageero ka helaya sido kale reer Galbeedka,Maraykanka iyo Isra’iil ayaa waxa uu ku xasuuqay kumanaan kun oo rayid ah,halka dhowr saacadood oo kaliya lagu xasuuqay ku dhawaad dad kun ka badan,xasuuqaas oo lagu tilmaamay kii ugu ba’naa ee ka dhaca dunida xilliyadan dambe.
Waxa sido kale dilaaga Sisi afgambigan kadib uu xabsiyada ku guray dad ka badan 60 kun qof oo rayid ah kuwaas oo qaarkood jidh-dil ay ugu dhinteen xabsiyada,halka in badan 300 gabdhood oo arday ah oo kamid ah dadkan lagu dhex kufsaday xabsiyadan.
Kasakow qoyskaska Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta inay xidhiidh la leeyihiin guumeeysiga Isra’iil, waxa dhanka kale dagaal ba’an ay ku hayaan cid kasta oo aminsan aragti maamul oo salka ku haysa Islaam sida Erdogan oo Imaaradka Carabtu ku bixiyay ($ 3 billion dollar) afgambigii guul-daraystay oo ay damacsanaayeen in maamulka Turkey uu gacanta u galiyo askari dilaa ah sida Sisi oo kale.
Waxa dhanka kale qoysaskanki ay farogalin qaawan ku hayaan dalalka Islaamka oo kamid yihiin Masar,Tunsia,Sudan,Libya,Somalia iyo Yemen oo ay taageeraan kooxo dambiilayaa ah iyo kaligoodtaliyayaal ka hor jooga in dalalkan ay gaadhaan deggenaansho iyo maamul wanaag salka ku haya dimuqraadiyad iyo madaxbaanida.
Waxa sido kale aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Yemen ay eedeeyeen qoyska Imaaradka Carabta inay dabada ka riixayso qorshe dhagareed lagu kala gooynayo dalka Yemen si ay gacanta ugu dhigto maamulka xeebaha qaybta koonfureed ee dalka,iyada oo u maraysa fulintiisa kooxo ay taageerto oo ay maal-galiso.
Safiirka qoyska Imaaraadka Carabta u fadhiya dalka Maraykanka ayaa waraysi uu dhawaan siiyaya warbaahinta Maraykanka ku faanay in Imaaradiisu ay doonayso in dalalka Islaamka laga sameeyo talisyo cilmaaniyiin ah(diin la’aan ah) oo awood badan laakiinse aynan rabin dimuqraadiyada ka dhalata,waxana uu intaa ku daray in Sucuudiga laftigiisa uu damacsan yahay in maamul cilmaani ah uu gacanta ku dhigo taladiisa.
« Idaacada Voice of Israel oo faafisay in amiir Sucuudi ah si qarsoodi ah usoo booqday Isra’iil	» Waxa alaha u naxariistee dhintay Axmed Yuussuf madixii daladii macaaradka Djibouti